ⓘ Enrique Iglesias
Enrique Miguel Iglesias Preysler သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားဖြင့် Enrique Iglesias ဟု သိကြပြီး အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆာင်နှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူသည် King of Latin Pop ဟု လေးစားခြင်းခံရသည်။ Iglesias သည် အသက်မွေးကျောင်းကို ၁၉၉၀အလယ်တွင် အမေရိကန် စပိန်ဘာသာ မှတ်တမ်းတံဆိပ် enrique Martimez အမည်အောက်မှ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ လက်တင်အမေရိကတွင်နှင့် အမေရိကန်မှ Hispanic ဈေးကွက် အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွင့်များထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထောင်စုနှစ်အပြောင်းအလဲတွင် သူသည် mainstream ဈေးကွက်ထဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Universal Music Latino နှင့် ၆၈သန်းအတွက် Universal Music Group အတွက် muti-album အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏စပိန်album များနှင့် Interscope Records အင်္ဂလိပ် album များဖြန့်ချိရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ တွင် Interscope Records နှင့် ခွဲခွာခဲ့ပြီး အခြားနိုင်ငံတကာဂီတအုပ်စုဖြစ်သည့် Republic Recordsနှင့် bilingual album များဖြန့်ချိရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅တွင် Iglesias သည် ပြန်လည်ခွဲခွာခဲ့ပြီး Sony Music နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လာမည့် album များကို စပိန်ရှိ Sony Music Latin နှင့် အင်္ဂလန်ရှိ RCA Records တို့နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။
Iglesias သည် ၁၅၉ သန်းခန့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံးစပိန် အနုပညာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ Iglesias သည် Billboard Chart တွင် ၁၅၀နံပါတ်ခန့် အမှတ်ဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် Billboard Hot 100 တွင် နံပါတ် ၅နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Billboard မှHot Latin Track တွင် စပိန်ဘာသာ single နေရာတွင် ၂၇ နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည် နံပါတ်တစ်နေရာတွင် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး သီချင်းစရင်းတွင် အရှည်ကြာဆုံးနေရာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ Iglesias သည် Billboard’s Dance Ghost တွင် ၁၄နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
1. အစောပိုင်းဘဝနေထိုင်မှုနှင့် မိသားစု
Iglesias သည် မက်ထရစ်စပိန်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ စပိန်အဆိုတော် Julio Iglesias နှင့် Fillipina မဂ္ဂဇင်းသတင်းစာဆရာ Isabel Preysler ၏ အငယ်ဆုံးကလေးဖြစ်သည်။ Isabel ၏အဒေါ်သည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Neile Adams ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်မင်းသမီး Steve Mc Queen ၏ ပထမဇနီးနှင့် အဖွားမှာ သရုပ်ဆောင် steven R.Mc Queen ဖြစ်သည်။ သူသည် Chabeliနှင့် Julio ၏ညီအစ်ကိုရင်းဖြစ်သည်။ သူ၏မိဘများမှာ ၁၉၇၉ တွင် ကွာရှင်းခဲ့သည်။ ပထမတွင် IglesIa နှင့် သူ၏ မောင်နှမများ မိခင်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သို့ ၁၉၈၆တွင် Iglesia ၏ အဖိုး Dr.Julio Iglesias Puga သည် အကြမ်းဖက်အုပ် ETA မှပြပေးဆွဲခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူတို့လုံခြုံမှုအတွက် Enrique နှင့် သူ၏အစ်ကို Julio ကို သူ၏ဖခင်ရှိရာ Miami သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် Belgrade, Serbia တွင် သူ၏မိခင်နှင့် တစ်နှစ်ခန့်နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းပေါ်သို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် Gulliver Preparatory School ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး University of Miami တွင်အလုပ်အကိုင်ကို သင်ယူခဲ့သည်။
Iglesias သည် သူ၏အစီအစဉ်ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖခင်ကို မသိစေချင်ခဲ့ပေ။ သူ၏မျိုးရိုးနာမည်ကို သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွင် မလိုချင်ခဲ့ပေ။ သူ၏မိသားစု nannay ထံမှ ငွေများချေးယူခဲ့ပြီး demo ကက်ဆက်တိတ်ခွေဖြင့် စပိန်သီချင်းတစ်ပုဒ်နှင့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ စတိတ်နာမည် Enrique Martinez အမည်မသိအဆိုရှင်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ Iglesias သည် Fonovisa Record တွင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ကောလိပ်ကျပြီးနောက် သူ၏ပထမ album ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် Toronton သို့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်။
2. သီချင်းရေးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သရုပ်ဆောင်ခြင်း
Iglesias သည် သီချင်းရေးဆရာ Gay Chamber နှင့် ပူးပေါင်း၍ Un Naovo Giorno ကို ရေးသားခဲ့သည်။ Andrea Bocelli ၏ ပထမဆုံး pop album မှဦးဆောင်သီချင်း ထိုသီချင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် First Day of My Life ဟု အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ခဲ့သည်။ Spice Girl Melanie C ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် ဥရောပဖြတ်သန်း၍ ကြီးမားလာခဲ့သည်။ များပြားစွာသော နိုင်ငံများသို့ နံပါတ်တစ်နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Iglesias American Idol မှ Clay Aiken အတွင်း The Way သီချင်းကို ပူးပေါင်းရေးခဲ့သည်။ UK တီးဝိုင်း The Hollies ၏ album တွင် သီချင်းလေးပုဒ်ကို Iglesias နှင့်ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ idol Allstars:2010 ဆွီဒင် idol စီးရီးမှ All I Need is You သီချင်းကိုIglesias နှင့် Andreas Carlson၊ Kelle Engstram နှင့် Kritstan Ludin နှင့် အတူပူးပေါင်းရေးခဲ့သည်။ သူသည် Jennifer Lopez ၏သီချင်း Dance Again ကို ၂၀၁၂ တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Billboard Hot Dance Club songs တွင် နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် Iglesias သည် off Broadway ကို ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ show ပွဲကို ဆုံးဖြတ်ကျင်းပခဲ့သည်။ show တွင် များစွာသော ကိုးကားမှုများပါဝင်ပြီး classic ၊ လက်တင်နှင့် pop သီချင်းများပါဝင်သည်။
Antonio Banderas, Salma Hayek နှင့် Johhny Depp နှင့်အတူ Robert Rodriguez ၏ Once UponaTime in Mexico တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅တွင် သူသည် ရုပ်မြင်သံကြားဟာသဇာတ်လမ်း Two andaHalf Mon တွင် Carpenter / handyman အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၄ခုတွင် pepsiမှ evil Roman emperor တွင်တီးခတ်ခဲ့သည်။ သူသည် Tommy Hilfiger, Doritos နှင့် Vieroy နာရီများအတွက် စီးပွားရေးအရ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Iglesias သည် သူမျက်နှာညာဘက်မှ အစွန်းအကွက်အတွက်၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ခွဲစိတ်ခဲ့သည်။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည် တင်းနစ်ကစားသမား Anna Kournikova နှင့်ချိန်းခဲ့သည်။ သူတို့သည် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ ဆက်ဆံရေးဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်သင့်မြတ်ခဲ့သည်။ Enrique Iglesias သည် မိုင်ယာမီကမ်းခြေတွင် အိမ်ဂေဟာအသစ်တစ်လုံးကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေ ၂၆ ဒေါ်လာခန့် တန်ကြေးရှိသည်။
4. လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကြောင်းအရင်း
၂၀၁၀တွင် Iglesias သည် Music for Relief နှင့် အမေရိကန်တီးဝိုင်းLinkin Park ၏ Download to Donate တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် Download to Donate for Haiti album ၊ ၂၀၁၀ Haiti earthquake album ကို အဆိုတော် Mike Shinoda နှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ များပြားစွာသော နေရာများတွင် album ကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ တွင် Iglesias သည် သူနောက်လို်က်များကို ဖိလစ်ပိုင်မှ Typhoon Haiyan မှ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် အမေရိကန် ကြက်ခြေနီအသင်းသို့ ငွေများပေးလှုခဲ့သည်။ Typhoon မုန်းတိုင်းတွင် ငလျှင်လုပ်ပြီးနောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ Iglesias သည် Hope City Habitat for Humanity, Help for Heroes, Live Earth Muscular Dystrpohy Association၊ Music for Relief၊ Special Olympics တို့ကို ထောက်ပံခဲ့သည်။